1 Waxaan ka WD Qaybaha drive dibadda adag soo kaban karto, Files?
Waxaan leeyahay 500 GB WD Qaybaha drive a dibadda adag. Waxaan leeyahay oo ku saabsan 40 fayl la files badan oo qiimo leh waxaa ku. Saaka markii aan furay ayaa waxaan ogaaday in in ka badan 10 fayl ayaa la waayay. Waxaan ahay si loo hubiyo in aanan anigu ku tirtiro wax kasta oo iyaga ka mid ah. Qof karo in aan u sheego sida aan dib u soo ceshano karaa fayl aan laga badiyay? Waxaan mahad doonaa caawimaad kasta oo aad noqon lahaa awoodo inuu kordhiyo. Thanks.
Waa hagaag, Baadi nidaamka noqon kartaa sababta ugu weyn ee aad lumaysa folder. Si kastaba ha ahaatee, ma aha inaad in aad ka welwelsan tahay waxa ku saabsan. My jeedin idiin yahay in aad joojiso qaadashada WD Qaybaha drive adag dibadda iyo raadiyo utility oo si degdeg ah aad u caawin. Maxaa yeelay, ilaa iyo inta aad fayl lumay aan la overwritten by xogta cusub ku drive, waxaana suurto gal iyaga ma doonan karo barnaamij dib u soo kabashada xogta WD Qaybaha.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa aalad dhinac saddexaad oo awood aad ka bogsato xogta WD Qaybaha in hab sahlan oo aan halis lahayn. Faylal ay aad WD Qaybaha drive dibadda adag oo laga yaabo in laga badiyay, maxaa yeelay, aad tirtirka shil ama ula kac ah, u kaxayn formatting, Baadi weerar virus ama nidaamka, iyo barnaamijkan waa waxa aad u baahan tahay. Waxaa soo kabanayo dhammaan foomamka file ka WD Qaybaha drive adag dibadeed, oo ay ku jiraan images, videos, files audio, waraaqaha, files txt, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka baarista WD Qaybaha drive adag dibadda iyo raadiyo files lumay it on hadda ah.
2 Qabtaan WD Qaybaha Recovery in 3 Talaabooyinka
Haddaba ee loo farsameeyo WD Qaybaha xogta soo kabashada la Wondershare Data Recovery for Windows. Haddii aad tahay qofka leh Mac ah, waxaad ka heli kartaa version Mac u raacno talaabooyinka la mid ah sidoo kale.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ka soo kabsado xogta ka WD Qaybaha drive dibadda adag ah
Marka laga bilaabo barnaamijka on your computer, aad arki doonaa interface ah 3 hababka soo kabashada. Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha ka mid ah hababka taxadir in ay bartaan sida ay u shaqeeyaan.
Halkan, inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted ama kharribeen files ka WD Qaybaha drive dibadda u adag, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 baarista WD Qaybaha drive dibadda adag
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad dooratid xijaab aad WD Qaybaha drive adag dibadda, taas oo uu furmo suuqa barnaamijka la soo daabici doonaa, oo guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Haddii files yihiin laga badiyay sababta oo ah formatting wadid aad, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad WD Qaybaha drive dibadda adag in si wanaagsan loo-xiran kartaa adiga oo computer la sameeyo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka WD Qaybaha drive dibadda adag
Ka dib markii iskaanka, ka helay waxyaabaha aad WD Qaybaha drive dibadda adag lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ku hubin kartaa in aad files lumay la soo kabsaday karo ama aan ka magacyada file.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan faylasha aad rabto in aad ka soo kabsado aad WD Qaybaha drive dibadda adag oo ka dhacay on "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado files ka soo kabsaday la overwritten, fadlan ha ka dib si aad u WD Qaybaha drive dibadda adag iyaga ku badbaadin inta ay socoto dib u soo kabashada.
> Resource > Ladnaansho > WD Qaybaha Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado WD Qaybaha Data